မရွိမျဖစ္ အေရးပါလာတဲ့ ရွားပါး သတၳဳ ေတြမွာ နိုင္ငံေရးေတြ ပါဝင္ေနပီလား ??? – ShweBo News
မရွိမျဖစ္ အေရးပါလာတဲ့ ရွားပါး သတၳဳ ေတြမွာ နိုင္ငံေရးေတြ ပါဝင္ေနပီလား ???
ေရးသားသူ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ညို
ယနေ့ အင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ မြေရှားဒြပ်စင်များလို့ခေါ်တဲ့ Rare Earth Metals အကြောင်းတင်ပြသွား ပါ့မယ်။ မြေရှားဒြပ်စင်များ Rare Earth Metals ၁၇ ခုရှိတယ်။ သူတို့ဟာ အလှည့်မှန်ဇယား ( Periodic Table ) ရဲ့ အောက်ဆုံးပိုင်းမှာရှိတဲ့ လင်သနိုဒ်အုပ်စုက ဒြပ်စင် ၁၅ ခုအပြင် စကင်ဒီယမ် ( Yttrium ) တို့လည်းပါ၀င်တယ်။ လူသိများခြင်းမရှိသေးတဲ့ အဲဒီဒြပ်စင် ၁၇ ခုဟာ ခေတ်မှီတိုးတက်တဲ့ လူနေမှုစနစ်ကြီး မှာ အင်မတန် အရေးပါလျက်ရှိပါတယ်။
Rare Earth Elements ဆိုတာကတော့ Periodic Table မှာ အနီရောင်နဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့ ဒြပ်စင်တွေ ကို ခေါ်တာပါဘဲ ၊ စုစုပေါင်း ၁၇ မျိုးရှိတယ် ၊ သဘာ၀မှာတော့ ဒီ Elements တွေကို အခြားဒြပ်စင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး အောက်ဆိုဒ်တွေ အဖြစ်နဲ့ တွေ့ရများတယ် စာတွေမှာတွေ့ရတဲ့ RE , REE ,REM စတာတွေဟာ ဒီရှားပါးသတ္တုတွေကို အတိုခေါ်ကြတာပါဘဲ
ကွန်ပြူတာတွေကို အရွယ်အစားသေးငယ်သွားအောင် ၊ နားကျပ် ( Headphone ) တွေ မိုက်ခရိုဖုန်း ( microphone ) တွေကို အင်အားကောင်းပြီးသေးငယ်သွားအောင် ဒီ Rare Earth Metals တွေက ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ မျိုးစပ် Hybrid ကားတွေရဲ့ ဘက်ထရီပါဝါတွေရအောင် ၊ ဟန်းဖုန်းတွေ smart ဖုန်းတွေ ၊ ကျောက်သင်ပုန်းကွန်ပျူတာတွေ Tablets တွေအတွက် ဓာတ်ခဲကအစ လိုအပ်တာတွေကို ဒီ Rare Earth Metals တွေကိုသုံးကာ ပြုလုပ်ရတယ်
လေယာဉ် အစိတ်အပိုင်းတွေ မျက်မှန်တွေ တီဗွီ X – ray တွေအားလုံးမှာ Rare Earth Metals တွေဟာပါ၀င်နေတယ်။ ဆိုလိုတာက ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးခေတ်မှီတိုးတက်နေစေဖို့ ဒီမြေရှားဒြပ်စင် Rare Earth Metals ဟာ မရှိမဖြစ် အရေးပါတယ်
Rare Earth Metals ဒြပ်စင်များ အင်မတန် အသုံး၀င်တာကြောင့် အနာဂတ်မှာ ပြဿနာဖြစ်ဖို့ အလားအလာ အများဆုံးသော ဒြပ်စင်များပဲလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်ကတည်းက တရုတ်ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ပင်းက ” အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ရေနံရှိတယ်။ တို့ဆီမှာလည်း Rare Earth Metals တွေရှိတယ် ” လို့ ပါတီ ကွန်ဂရက်မှာ ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
တိန့်ရှောင်ပင်းဟာ Rare Earth Metals တွေဟာ ရေနံလို လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်လာမှကို အစောကြီးကတည်းက တွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာမှာလိုအပ်တဲ့ Rare Earth Metals ပမာဏရဲ့ ၉၂%ကို တရုတ်က ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချနေပါတယ်။ ဒီတော့တရုတ်ဟာ Rare Earth Metals ကို သူရောင်းချင်တဲ့သူမှ ရောင်းလို့ရတယ်။ ရောင်းချင်တဲ့စျေးနဲ့ရောင်းနေတယ်။ ၀ယ်လိုအားများနေတဲ့အတွက်လည်း ကြိုက်သလိုစျေးနှုန်းမြှင့်တင်ရောင်းချနိုင်တယ်။ဂဒါကြောင့် Rare Earth Metals သတ္တုတွေဟာ ရွှေလို တန်ဖိုးကြီးမားလာတော့တာပါပဲ။
ဒီအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ အီးယူနဲ့ ဂျပန်တို့က တရုတ်ရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးမညီမျှမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်စေဖို့ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ WTO ထံတိုင်ကြားထားခဲ့ပါတယ်။ အမှန်မှာ Rare Earth Metals ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းလုံး နေရာအနှံ့မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Rare Earth အများဆုံးရှိတာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထုတ်လုပ်စရိတ် တွက်ခြေမကိုက်လို့ မထုတ်လုပ်ဖြစ်တော့ဘဲ ၀ယ်ယူသုံးစွဲနေတာဖြစ်တယ်။
ယနေ့မှာ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဟာ ကာလီဖိုးနီးယားက Mountain Pass မှာ ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ပြီး အမြတ်ရအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကြာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ကတော့ Rare Earth ကို သံထုတ်လုပ်ရာက ဘေးထွက်ပစ္စည်းအနေနဲ့ ထုတ်တာမို့ အဆင်ပြေ တွက်ခြေကိုက်လှပါတယ်။
ယနေ့လူကြိုက်များတဲ့ Toyota Pirus မျိုးစပ် Hybrid ကားမှာ လင်သနမ် ၁၀ ပေါင် သို့မဟုတ် သုံးပိဿာခန့် ပါ၀င်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိုင်ရှင်တွေကတော့ ဒါကိုမသိဘူး။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကားဘတ္ထရီကို နီကယ်သတ္တုစပ်လို့ပဲ ရေးထားတာကိုး။ အဲဒီစပ်ထားတဲ့ သတ္တုဆိုတာဟာ လင်သနမ်ပါပဲ။ လင်သနမ်ဘတ္ထရီဟာ ယနေ့ကားတွေမှာသုံးတဲ့ ခဲဘတ္ထရီတွေထက် နှစ်ဆလောက်ပိုပြီး အစွမ်းထက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်လင်သနမ်ဘက္ထရီဟာအရေးပါတော့တာပဲပေါ့။ ဒါကြောင့် လင်သနမ်ကို အမြောက်အမြား လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း ယနေ့ထွက်တဲ့ လင်သနမ်ပမာဏဟာ မျိုးစပ်ကားတွေရဲ့ ဘက္ထရီတွေသုံးဖို့အတွက် အလုံအလောက်မပေးနိုင်သေးတာကို တွေ့ရတယ်။ iPhone မှာသုံးတဲ့ ဘက္ထရီလည်း ဒီပုံစံပါပဲ
တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Rare Earth တွေဟာ ကွန်ပြူတာ Hard Disc Drive တွေကအစ ယနေ့သုံးနေတဲ့ Smart Phone တွေမှာ မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေပါပဲ။ အီလက်ထရွန်နစ် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးမှာ Rare Earth တွေပါ၀င်တယ်။ LED တွေအတွက်လည်းသုံးရတယ်။ အရင်က ပတ္တမြားက အနီရောင်လေဆာကို ထုတ်ပေးနိုင်ပေမယ့် Rare Earth တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Europium ဆိုရင် အနီရောင် တောက်တောက်ပပကို ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ သတ္တုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူ့ကို တီဗွီ တွေမှာသုံးတယ်။ အနီရောင်မီးသီး red LED နေရာမှာ သုံးတာပါပဲ။
ယနေ့မှာ မလေးရှားနိုင်ငံသား ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ လင်းနပ်စ် ( Lynas ) ရဲ့ Rare Earth ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတယ်။ မလေးနိုင်ငံသားတွေဟာ မလေးအစိုးရနဲ့ သြစတြေလျားအစိုးရတို့ရဲ့ Rare Earth ထုတ်လုပ်ဖို့ သဘောတူညီစာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ ဆန္ဒပြတာပါပဲ။ အဓိက ကတော့ ဒီ Rare Earth ထုတ်လုပ်မှုဟာ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိခိုက်စေတဲ့အချက်ကြောင့်ပါပဲတဲ့။
Rare Earth တွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့အခါ အက်ဆစ်တွေ အယ်ကာလီတွေ အများကြီးသုံးရတယ်။ ကျောက်မီးသွေးတွေလည်း သုံးရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြွင်းကျန်တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေမှာ အဏုမြူသတ္တိကြွနေတာကို တွေ့ရတတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Rare Earth တွေနဲ့အတူThorium လို အဏုမြူသတ္တိကြွပစ္စည်းတွေပါလာတတ်လို့ပါပဲ။
၁၉၉၂ ခုနှစ်က ဂျပန်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မစ်ဆူဘီရှိ ဆေးကုမ္ပဏီဟာ မလေးရှားမှာ အပိတ်ခံလိုက်ရတယ်။ အကြောင်းကတော့ စက်ရုံတစ်ဝိုက် ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ ကိုယ်၀န်ဆောင်များဟာ သန္ဓေသား ပျက်စီးခြင်း ၊ မသန်မစွမ်းကလေးများ မွေးဖွားလာခြင်းတွေဖြစ်ပွားပြီး လူအများဟာ လူကီးမီးယားလို့ခေါ်တဲ့ သွေးကင်ဆာဖြစ်မှုနှုန်း များလာခြင်းတို့ကြောင့်ပဲလို့ဆိုတယ်။ Lynas ကတော့ သူတို့ကုမ္ပဏီက ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ သူတို့ဟာ တရုတ်ရဲ့ Rare Earth တွေစျေးကြီးကြီးနဲ့ ရောင်းနေတာကို ယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချစျေးချပစ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။
ါပေမယ့် တစ်ဖက်က သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ Rare Earth ပြဿနာမှာ နိုင်ငံရေးတွေ အများကြီး ပါ၀င်နေတယ်။ တိုးတက်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပေးဆပ်ရတာတွေ အများကြီး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ပြည်သူများနှင့်တကွ အစိုးရတွေကလည်း သတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Be the first to comment on "မရွိမျဖစ္ အေရးပါလာတဲ့ ရွားပါး သတၳဳ ေတြမွာ နိုင္ငံေရးေတြ ပါဝင္ေနပီလား ???"